धुन्चेमा बाक्लो हिमपात [फोटोफिचर]
बिहीबार बिहानैदेखि सदरमुकाम धुन्चे लगायत जिल्लाको उच्च हिमाली क्षेत्रमा बाक्लो हिमपात भएको छ । यसवर्ष सदरमुकाम धुन्चेसम्मै बाक्लो हिमपात भएको यो दोस्रो पटक हो । बाक्लो हिमपात भएपछि सदरमुकाम धुन्चेका स्थानीयहरू हिउँ खेलेर रमाउनेको भीड लागेको थियो ।
बेत्रावतीमा गोरुको घम्साघम्सी [फोटोफिचर]
रसुवा र नुवाकोट जिल्लाको सिमानामा रहेको ऐतिहासिक धार्मिक तिर्थस्थल बेत्रावतीमा यस वर्ष पनि गोरु जुधाइएको छ । प्रत्येक वर्षको मकर सङ्क्रान्तिका बेत्रावतीमा गोरु जुधाउने परम्परा रहिआएको छ । यस वर्ष आठ हल गोरुको घम्साघम्सी भएको छ ।
रसुवा र नुवाकोट जिल्लाको सिमानामा पर्ने बेत्रावतीस्थित उत्तर गयामा शनिवार भक्तजनको भीड लागेको छ । त्रिशूली र फलाखु खोलाको संगमस्थल रहेको उक्त क्षेत्रमा बर्सेनि पौषीऔंशीका दिन हजारौँ भक्तजनहरूले दिवङ्गत आमाबुवा तथा आफन्तका नाममा श्राद्ध, दान, तर्पण गर्दछन् । शनिवार पनि बिहानैदेखि भक्तजन नदी किनारमा भरिभराउ थिए ।
आहा ! हिमाल [फोटोफिचर]
आँखै अगाडि चारैतिर दर्जन बढी हिमाल देख्न पाउँदा कसको मन नलोभिएला र ? पाँच हजार मिटर उचाइमा रहेको चेर्को रीबाट एक दर्जनभन्दा बढी हिमाल अवलोकन गर्न सकिन्छ । चेर्को रीबाट देखिने हिमालको मनमोहक दृश्यले आनन्द आउँछ । क्यान्जिनबाट चेर्को री पुग्न करिब ४ घण्टाको उकालो चढ्न पर्दछ । हिमाली दृश्यले उकाले चढ्दाको थकाइ नै भुलिन्छ ।
गाउँभरि रेलिङसहितका पक्की गोरेटो बाटो [फोटोफिचर]
नमुना गाउँ बनाउने अभियानसहित उत्तरगया गाउँपालिका ३ ठूलोगाउँको पैरेटोमा रेलिङसहितको पक्की गोरेटो बाटो निर्माण गरिएको छ । गाउँमाझमा पक्की गोरेटो बाटो बनेपछि स्थानीयमा खुसी छाएको छ । आधुनिक गोरेटो बाटोले वृद्धवृद्धा, बालबालिका लगायतलाई सजिलो भएको उत्तरगया गांउपालिका ३ का अध्यक्ष लालबहादुर तामाङले बताए ।